Ma Xukun Iyo Xabsi Ayay U Baahnaayeen Darbi Jiifku MiseXanaanayn?
Tuesday February 05, 2019 - 10:02:55 in Wararka by saleban Cilmi
Garsooraha maxkamada gobalka Maroodi –jeex Garsoore Yaxye Xuseen Yuusuf, oo u waramay BBC-da ayaa yidhi "Waxa ay maxkamada gobalka Hargeysa ay xukuntay 20 eedaysane oo ku eedaysan sakhrad iyo arbushaad xafiis, marka hore eedaysanayaashu waxay ahaayeen 23 waxaanay maxkamadu sii daysay oo ay danbi ku wayday 3 ka mid ah labaatankii kalena maxkamadu waa ay xukuntay.”
Waxa la waydiiyay garsooraha waxa loo haystay kooxda darbi jiifta ah ee la xukumay" Waxa loo haystay laba qodob ayay ahaayeen arbushaad xafiis iyo sakhrad labadaas ayaa loo hastay, arbushaadii waa ay ku wayday waxa ay ku heshay sakhradii oo mukhaadaraadkii lagu eedaynaayay ayay maxkamadu ku heshay, dhamaan markii aanu mid midh u waydiinayna maxkamada ayay qiraal ay ka bixiyeen.”
Sheekh Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan-rakuub, ayaa isagoo ka falcelinaya xukunkan wuxuu bartiisa facebooku isku weydiiyay su’aashan, "Maandooriyuhu ma kolkii ay cawdeen ayuu mamnuuc ka noqday. Awalba waa kuwii gidaarrada ku cabbayee?.”
Nin kale oo dhallinyaro ah ayaa isna yidhi "Dhallinyaradan waxa ay cabashadoosu ku soo beegantahay wakhtigan ay dalka ka jirto dhaxan qaboow, waxaanay is tuseen inay wasaarada arrimaha bulshada u cabasho tagaan si looga caawiyo wax ay dhaxanta ka huwadaan, laakiin halkii laga dhagaysan lahaa, wixii la awoodana lala qaban lahaa, waxa lagu guray xabsi, markii dambena maxkamadu waxay ku xukuntay dambi ah inay wax cabsanaayeen. Dhallinyaradan waxay ahayd in daryeel loo fidiyo oo xataa dadka ganacsatada ah loo weydiiyo inay caawiyaan.” Sidaas waxa baraha bulshada ku baahiyay nin dhallinyaro reer Somaliland ah oo ka falcelinayay xukunka shalay lagu riday dhallinyaradaas darbi jiifka ah.